သင်ကမိန်းက လေးဆန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်သာဆိုရင်ဒီအချက်တွေထဲက ပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးနော်…. – Trend.com.mm
သင်ကမိန်းက လေးဆန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်သာဆိုရင်ဒီအချက်တွေထဲက ပြေးမလွတ်နိုင်ပါဘူးနော်….
Posted on June 8, 2019 June 4, 2019 by Shun Lei Phyo
ကိုယ်ကမိန်းမဆန်တဲ့မိန်းကလေးဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ကြည့်ဖူးလား….မိန်းက လေးအဖြစ်မွေးဖွားလာပင်မဲ့ မိန်းက လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇအပြည့်မပါတဲ့ မိန်းမသားမျိုးရှိသလို မိန်းမဗီဇအပြည့်လွန်ပြီး မိန်းမဆန်လွန်းတဲ့မိန်းမသားတွေလည်းအများကြီးပါ။ မိန်းမဆန်ချင်းမဆန်ချင်းဆိုတာ မိန်းမလို ၀တ်ထားမှ မိန်းမဆန်တယ် ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိန်းက လေးတစ်ယောက်ရဲ့ Manners တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေကလည်းဒီမိန်းမရဲ့ မိန်းမဆန်တဲ့စိတ်ကို ဖော်ပြ နေတတ်ပါတယ်။ သင်ကောမိန်းမဆန်တဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်လား? အောက်ကအချက်လေးတွေက မိန်းမဆန်တဲ့မိန်းမ တွေရဲ့ အများဆုံးတူညီတဲ့အချက်တွေမလို့သင်မိန်းမဆန်တဲ့မိန်းမ ဟုတ်မဟုတ်စစ်ကြည့်ရ အောင်လား…
(၁) အိတ်၊ အလှပြင်ပစ္စည်းဖိနပ်နဲ့ အင်္ကျီအ၀တ်စားတွေထဲကတစ်ခုခုကို မလိုအပ်လည်းတစ်လတစ်ခါလောက်အနည်းဆုံးဝယ်ရမှ ကျေနပ်တတ်သူလား
(၂) ငါတို့က သူများအတင်းမ ပြောတတ်ဖူးလို့ခဏခဏလူကြားကောင်းအောင်ပြောနေတတ်ပင်မဲ့ လူစုံရင် တစ်စုံတစ်ယောက်အ ကြောင်းကို အားပါးတရ ပြောတတ်တယ်။
(၃) အစားသောက်ကိုကြိုက်တာ ထက် မက်တယ်။ စားစရာမရှိတာမဟုတ်ပင်မဲ့ နေ့စဉ်စားချင်တာ တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးများနေတတ်တယ်။
(၄) ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်အမျိုးသားက ကိုယ့်ကို ဂရုအရမ်းစိုက်ကြောင်းဘယ်သူမှမ မေးလည်းမသိသိအောင်ပြတတ်ကြတယ်
(၅) မလိုအပ်ပဲဝယ်ထားမိတဲ့အရာတွေများနေတတ်သလို နောက်လိုမှာပါဆိုပြီးနှ မြောတသစွာနဲ့ အိမ်အရှုပ်ခံပြီးသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းများတယ်
(၆) သူများကိုမနာလိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့ အ ပေါ်ယံအပြင်ဆင်အလှအ ပမှာ တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြိတ်ပြိုင်ချင်တတ်ကြတယ်
(၇) ယောကျာ်းအ ပေါ်နားလည် ပေးနိုင်တဲ့မိန်းမဖြစ်ချင်ပင်မဲ့ သ၀န်တိုမှုတွေက အတိုင်းထက်လွန်နေတတ်ကြတယ်။ သူမရှိလည်းဖြစ်တယ်ပြောပင်မဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားအနားမှာ မရှိတော့မှာ သေ လောက်အောင်စိုးရိမ်ကြတယ်။
ကိုယျကမိနျးမဆနျတဲ့မိနျးကလေးဟုတျမဟုတျ ဆနျးစဈကွညျ့ဖူးလား….မိနျးက လေးအဖွဈမှေးဖှားလာပငျမဲ့ မိနျးက လေးတဈယောကျရဲ့ ဗီဇအပွညျ့မပါတဲ့ မိနျးမသားမြိုးရှိသလို မိနျးမဗီဇအပွညျ့လှနျပွီး မိနျးမဆနျလှနျးတဲ့မိနျးမသားတှလေညျးအမြားကွီးပါ။ မိနျးမဆနျခငျြးမဆနျခငျြးဆိုတာ မိနျးမလို ဝတျထားမှ မိနျးမဆနျတယျ ဆိုတာမြိုးမဟုတျပဲ မိနျးက လေးတဈယောကျရဲ့ Manners တှေစိတျနစေိတျထားတှကေလညျးဒီမိနျးမရဲ့ မိနျးမဆနျတဲ့စိတျကို ဖျောပွ နတေတျပါတယျ။ သငျကောမိနျးမဆနျတဲ့မိနျးမသားတဈယောကျလား? အောကျကအခကျြလေးတှကေ မိနျးမဆနျတဲ့မိနျးမ တှရေဲ့ အမြားဆုံးတူညီတဲ့အခကျြတှမေလို့သငျမိနျးမဆနျတဲ့မိနျးမ ဟုတျမဟုတျစဈကွညျ့ရ အောငျလား…(၁) အိတျ၊ အလှပွငျပစ်စညျးဖိနပျနဲ့ အကငြ်ျီအဝတျစားတှထေဲကတဈခုခုကို မလိုအပျလညျးတဈလတဈခါလောကျအနညျးဆုံးဝယျရမှ ကနြေပျတတျသူလား(၂) ငါတို့က သူမြားအတငျးမ ပွောတတျဖူးလို့ခဏခဏလူကွားကောငျးအောငျပွောနတေတျပငျမဲ့ လူစုံရငျ တဈစုံတဈယောကျအ ကွောငျးကို အားပါးတရ ပွောတတျတယျ။(၃) အစားသောကျကိုကွိုကျတာ ထကျ မကျတယျ။ စားစရာမရှိတာမဟုတျပငျမဲ့ နစေ့ဉျစားခငျြတာ တှတေဈမြိုးပွီးတဈမြိုးမြားနတေတျတယျ။(၄) ကိုယျ့ခဈြသူ၊ ကိုယျ့အမြိုးသားက ကိုယျ့ကို ဂရုအရမျးစိုကျကွောငျးဘယျသူမှမ မေးလညျးမသိသိအောငျပွတတျကွတယျ(၅) မလိုအပျပဲဝယျထားမိတဲ့အရာတှမြေားနတေတျသလို နောကျလိုမှာပါဆိုပွီးနှ မွောတသစှာနဲ့ အိမျအရှုပျခံပွီးသိမျးထားတဲ့ပစ်စညျးတှလေညျးမြားတယျ(၆) သူမြားကိုမနာလိုတာမြိုးတော့မဟုတျပငျမဲ့ အ ပျေါယံအပွငျဆငျအလှအ ပမှာ တော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွိတျပွိုငျခငျြတတျကွတယျ(၇) ယောကြာျးအ ပျေါနားလညျ ပေးနိုငျတဲ့မိနျးမဖွဈခငျြပငျမဲ့ သဝနျတိုမှုတှကေ အတိုငျးထကျလှနျနတေတျကွတယျ။ သူမရှိလညျးဖွဈတယျပွောပငျမဲ့ ကိုယျခဈြတဲ့ ယောကျြားအနားမှာ မရှိတော့မှာ သေ လောကျအောငျစိုးရိမျကွတယျ။ကဲ သငျရောမိနျးမဆနျတဲ့စိတျနဲ့မိနျးကလေးမြိုးလား?…
Posted in Beauty, Girls' Fashion, Lifestyle
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ထင်ရပင်မဲ့ ကိုယ်သွက်နေ မှအဆင်ပြေမဲ့ နေရာမျိုးဆိုတာ…